ब्रान्ड समस्याहरूको बावजूद थोक प्रति प्रतिबद्ध रहन्छ - सांप्रदायिक समाचार: अनलाइन व्यापार, थोक र B2B बजार समाचार
सम्पादकको पिक डिसेम्बर 6, 2020 डिसेम्बर 16, 2020 थोक र B2B समीक्षा अर्जेन्टिना थोक र B2B, एशिया थोक र B2B, बंगलादेश थोक र B2B, बेल्जियम थोक र B2B, ब्लग, बेलायत थोक र B2B, बुल्गारिया थोक र B2B, व्यापार, क्यानाडा थोक र B2B, चीन थोक र B2B, चेकोस्लोवाकिया थोक र B2B, डेनमार्क थोक र B2B, DR कांगो थोक र B2B, सम्पादकको पिक, इजिप्ट थोक - B2B, फ्रान्स थोक - B2B, जर्मनी थोक र B2B, ग्लोबल थोक अनलाइन, ग्लोबल विश्व, ग्रीस थोक र B2B, ह Hongक Kong थोक र B2B, हंगेरी थोक र B2B, भारत थोक र B2B, इन्डोनेशिया थोक र B2B, इटाली पसल थोक र B2B, जापान थोक र B2B, केन्या शप ग्लोबल, मेक्सिको थोक र B2B, नाइजेरिया थोक - B2B, पाकिस्तान थोक र B2B, फिलिपिन्स थोक र B2B, रूस थोक र B2B, B2B अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, ग्लोब किन्नुहोस्, थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस्, दक्षिण अफ्रीका थोक - B2B, दक्षिण कोरिया थोक र B2B, स्पेन थोक र B2B, थाईल्याण्ड थोक र B2B, टर्की थोक र B2B, युक्रेन थोक र B2B, थोक - B2B, थोक बजार अनलाइन खरीद र बिक्री
कोरोनाभाइरस महामारीको कारणले विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमा अवरोध खडा भए पनि थोक मूल्य एक मजबूत राजस्व प्रवाह बन्न गएको छ। यद्यपि धेरै अधिकारीहरूले भने कि त्यहाँ केही प्राविधिक परिवर्तनहरू हुनु आवश्यक छ। त्यो हो, बाँच्नको लागि अधिक स्वचालित र सुव्यवस्थित प्रक्रियाहरू लागू गर्न आवश्यक छ।
थोक वितरण प्रक्रियामा सबैभन्दा ठूलो दुखाइ पोइन्टहरू मध्ये, एक परिचालन र आईटी दृष्टिकोणबाट, "मानकीकरणको अभाव" सबैभन्दा सामान्य गुनासो थियो, र एक आरामदायक मार्जिन द्वारा। यसको अनुसरण गर्दै, "अर्डरिंग प्रक्रियामा पign्क्तिबद्धताको अभाव," "खुद्रा साझेदारीबाट समर्थनको अभाव," "आपूर्ति श्रृंखला सुव्यवस्थित छैन" र "डेटाको अभाव" ले बराबर संख्यामा टाउको दुखाइको कारण बनायो।
जहाँ पैसा जाँदैछ, र जहाँ उत्तरदाताहरूले सबैभन्दा बढ्दो वृद्धि हेर्ने आशा गरेका थिए, दिशा स्पष्ट थिए। कार्यकारीहरू र ब्रान्ड नेताहरू अनलाइन जाँदैछन्, र ई-वाणिज्य मार्फत, प्रक्रिया स्ट्रिमलाइन गर्न जुन हालका घटनाहरूको प्रकाशमा केवल धेरै जटिल भएको छ। स्पष्ट रूपमा, ब्रान्डहरू थोक मोडल प्रति वचनबद्ध छन्, र यसलाई सुधार गर्नका लागि अनलाइन खोजी गर्दै।
यो जहाँ नयाँ ग्लोबल अनलाइन थोक बजार, जस्तै ग्लोब किन्नुहोस्, भित्र आउनुहोस्। विशेष गरी शप द ग्लोबमा हामीले महँगो र अनावश्यक बिचौलिएहरू हटायौं, जसले व्यवसायलाई यी अनिश्चित समयमा लागत घटाउन मद्दत गर्दछ।
एक स्थापित ग्लोबल समाचार कम्पनी द्वारा स्वामित्व प्राप्त, ग्लोब किन्नुहोस् विक्रेताहरूलाई हाम्रो वेबसाइटमा समाचार प्रकाशन र लिस्टिंग पोष्ट गर्न अनुमति दिँदछ, कुनै अग्रिममा, जेब लागतको बाहिर। बदलामा, ग्लोब किन्नुहोस् विक्रेताहरू चार्ज गर्दछन् उनीहरूले बेचेको मात्र १२%।
ग्लोब किन्नुहोस् मा सञ्चालन गर्दछ १०० भन्दा बढी प्रमुख भाषाहरू, तपाईं प्रत्येकले बुझ्नुहुने भाषामा विक्रेताहरूलाई विश्वभरि खरिददारहरूसँग कनेक्ट हुन अनुमति दिँदै। ग्लोब पनि प्रदान गर्दछ मुद्राको एक विस्तृत विविधता, माल र पूँजी को एक सजिलो प्रवाह सुनिश्चित जहाँ तपाईं प्रत्येक हुन सक्छ। दुबै बढीहरू बाटोमा छन्।
ग्लोब शप हाम्रो साथमा तेस्रो साइट हो फ्रीलान्स ग्लोबल गिग, र अभिभावक साइट, सांप्रदायिक समाचार। सांप्रदायिक समाचारले उत्पादन र सेवाहरू, बजार र उद्योगहरूको विविधतामा अप-टु-डेट रिपोर्टहरू र पूर्वानुमान प्रदान गर्दछ। हामी पाठकहरूलाई दैनिक समाचार, व्यापार, खेल, र विश्लेषण प्रदान गर्दछौं। जो कोहीले हाम्रो लक्षित लेखहरू साम्प्रदायिक समाचारहरूमा पढ्न सक्छन्, गुगल समाचार, वा फेसबुक समाचार। हाम्रो साइट को बारे मा अधिक जानकारी को लागी, यहाँ क्लिक गर्नुहोस्.
सबै तीन साइटहरूले द्रुत बृद्धि प्रदर्शन गरीरहेका छन् र आफैलाई वैश्विक प्लेटफार्मको रूपमा स्थापित गर्दछ जुन हाम्रा विक्रेताहरूलाई कुनै वा ज्यादै कम लागतमा गरिन्छ। एक साधारण साइन-अप प्रक्रिया र न्यूनतम सेटअपको साथ, ग्लोब किन्नुहोस् व्यावसायलाई व्यावहारिक रूपमा कुनै समयको लागि व्यवसायहरू उठ्न र चालू हुन अनुमति दिन्छ।
तपाईं थोक वितरण मोडेलको मान चिन्नुहुन्छ। गरौं ग्लोब किन्नुहोस् तपाइँलाई डिजिटल जान, नवीन, र तपाइँको व्यापार विस्तार गर्न आवश्यक चुनौतिहरूको सामना गर्न मद्दत गर्दछ। आज यसलाई प्रयोग गरेर हेर्नुहोस्! ग्लोबको ग्लोबल थोक विक्रेता दर्ता खरीद गर्नुहोस् नि: शुल्क छ।
थोक अनलाइन खरीद गर्नुहोस् सांप्रदायिक समाचार FGG फ्रीलान्स ग्लोबल गिग थोक अनलाइन बेच्नुहोस् ग्लोब किन्नुहोस्
चिनियाँ सरकारले निजी Productsण उत्पादनलाई लक्षित गर्दछ
P कसरी प्रोडक्टिभ हुने र अझ बढी हासिल गर्ने भन्ने बारे पावल प्रेडा भोईचुबाट आन्तरिक सल्लाहहरू!